Inkqubo yePordede (ngoku enguPlusdede) inyonyoba kwiVenkile ye App | IPhone iindaba
Inkqubo yePordede (ngoku enguPlusdede) inyonyoba kwiVenkile ye App
UIgnacio Sala | | Iapps zokusebenza
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, iwebhusayithi yePordede, eyaziwa njenge Ivenkile yasimahla yevidiyo yeNetflix, wayeka ukusebenza engakhange achaze unobangela wokunyamalala kwakhe, nangona ityala elininzi lalizakuba kukuqhekezwa kwakhe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ngexesha leenyanga ngaphambi kokunyamalala kwayo, inkonzo yewebhu yashiya inqweneleka kuba kwiimeko ezininzi ayisebenzi, inyanzelisa abasebenzisi abaninzi ukuba basebenzise amanye amaphepha ewebhu ukonwabela uthotho lwee-movie abazithandayo ngaphandle kokuhlawulela nayiphi na inkonzo yewebhu. UPordede ubuyile kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngegama elitsha, u-Plusdede kwaye ngethamsanqa uthathe eli thuba sneak a application to the App Store to enjoy all its content.
Njengoko sinokubona kwimbali yesicelo, isicelo se-Plusdede besifumaneka kwiVenkile yeVenkile kangangeveki, kwaye ukusukela ngoko sele sifumene uhlaziyo ezimbini ngaphandle kwabo baphetheyo ukuphononongwa kwezicelo ezifika kwiVenkile ye App, kunye kunye nohlaziyo lwabo ukhathazekile ukujonga ukuba singafikelela njani kulo nakuphi na uthotho kunye nefilimu. Kucacile ukuba baya kuyithemba inkcazo yesicelo, apho sixelelwa khona ukuba iPlusdede sisicelo sokulawula nokujonga ukubekwa esweni kweemovie kunye nomdlalo weqonga esiwubukeleyo, ukwazi ngalo lonke ixesha ukuba yeyiphi isiqendu okanye yeyiphi imovie esiyibonileyo .
Ikwasivumela ukuba silinganise iimovie kunye nothotho esilulandelayo ukongeza kokucebisa uthotho lwethu lweefilimu okanye iimuvi kwabanye abasebenzisi. Kodwa ukongeza, ikwavumela ukuba sonwabele wonke umxholo okhoyo kuleqonga ngokuthe ngqo kwi-iPhone yethu okanye kwi-iPad, ngaphandle kokubandezeleka kuluntu olonwabileyo lwenguqulo yewebhu. Ukuze usebenzise i-Plusdede, ukuba besisele singabasebenzisi bePordede, kufuneka nje sebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, ngenxa yoko akusayi kubakho mfuneko yokuba sibhalise kwakhona.
Enye yeenzuzo esisifumana esi sicelo xa kuthelekiswa nohlobo lwewebhu ayisiyi kuhamba kuphela, kodwa ikwanayo intengiso isezantsi kakhulu kunoko sinokukufumana kwiwebhusayithi, iya kuba yindlela eqhelekileyo yokutya umxholo ovela kwiPordede entsha. Asazi ukuba izakuhlala ixesha elingakanani kwiVenkile ye App emva kokupapasha eli nqaku, ke sukuthatha ixesha elide ukuyikhuphela ngaphambi kokuba ihambe kakhulu.
Gcina ukhumbula ukuba le webhusayithi ayigcini iimovie okanye iinkqubos, ibonelela kuphela amakhonkco ukuze akwazi ukuzibona, ke kusenokwenzeka ukuba abanye bayeke ukusebenza, kodwa ucinga ukuba yinkonzo yasimahla apho unakho ukufikelela kuyo yonke imixholo oyifunayo ngaphandle kokuhlawula nantoni na, wena kufuneka ibhetyebhetye kancinci nokusebenza kwayo.
Njengokuba oko kwakunganelanga, abasebenzisi be-iPhone X abasayi kuba nezikhalazo ukusukela oko usetyenziso luxhasa ifomathi entsha yescreen.
Isicelo asisafumaneki kwiVenkile ye App
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Inkqubo yePordede (ngoku enguPlusdede) inyonyoba kwiVenkile ye App
Kulunge kakhulu kodwa kuseneempazamo ezinje ngokulandela uthotho okanye ukubeka imovie njengoko kulindelwe ukubona ...
URaúl Aviles sitsho
Kubalulekile ukuba ngaphandle kokubhalisa, ukwenza iakhawunti isebenze ... ukuba ndiye ndaphambana okwethutyana ngenxa yokuqaqamba kwam !! 😉
Mkhulu ukufumana uNacho! Masibone ukuba ihlala ixesha elingakanani eVenkileni ...
Phendula uRaúl Avilés
Umhambisi weHughesNet oyiNtloko sitsho
Loluphi ulwazi olulungileyo kunye nenqaku elilungileyo !!
Ngaphandle kwamathandabuzo ngamanye amaxesha olu lwazi luyimfuneko, olonyusa impikiswano malunga nezihloko ezinje, ezifanelekileyo. Ndiyakumema ukuba undwendwele ibhlog yam malunga ne-Intanethi ye-intanethi kunye nezinye izinto ezibonisa umdla.
Phendula HughesNet Master Distributor
Inyani pordede Yeyona webhusayithi ibalaseleyo ndiyaziyo ukubukela imovie kwi-Intanethi ngaphandle kwamathandabuzo, ndiyathemba ukuba iphila ngakumbi.
inyaniso yokuba pordede Yeyona webhusayithi ibalaseleyo eSpain, ngaphandle kwamathandabuzo bahlala bekwazi ukuba babodwa kwaye babe nezinto ezintsha, ukuvuyisana
Inkonzo yokusasaza yeDisney iya kuba nexabiso eliphantsi kuneNetflix
Inkwenkwana eneminyaka elishumi ubudala ivula i-X kamama wayo ngokuhlekisa nge-ID yobuso